Madaxweynaha Somalia oo bogaadin iyo mahadnaq u soo jeediyey dowlada Imaaraadka – idalenews.com
Madaxweynaha Somalia oo bogaadin iyo mahadnaq u soo jeediyey dowlada Imaaraadka
Muqdisho (INO) Madaxweynaha Soomaaliya,Xasan Sheekh Maxmuud ayaa sheegay in dawladda Imaaraadka Carabta ay kaalin mug leh ka qaadato dib u dhiska Soomaaliya.
Bayaan laga soo saaray xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in dalka isutagga Imaaraadka Carabta uu yahay dal saaxib dhaw la ah Soomaaliya mar kastana u taagan gacansiinta shacabka Soomaaliya horayna uga qeyb qaadatay taageeradooda ee arrimaha bni’adnimada la xiriirta.
Madaxweyne Xasan wuxuu caddeeyay in dawladda iyo dhacabka Soomaaliya ay aad u qadarinayaan kaalmada aan shuruudda ku xirneyn oo ay xukuumdda Imaaraadka u fidiso Soomaalia siiba dhinacyada Arrimaha Bulshada ,wuxuuna xusay in labada dal ay wadaagaan arrimo badan uunaka dhaxeeyo iskaashi dhinacyo badan leh siiba Ganacsiga iyo xiriir Taariikhi ah ah ee soo jireen ah.
Dowlada Imaaradka ayaa door muuqdo horay ugu lahayd taageerada dhinaca bini aadannimada ayadoo waayahan danbe bilaawaday in ay si toos ah uga qeyb qaadato dib usoo nooleynta ciidanka xooga dalka Soomaaliya.
Kenya oo hakisay Shidaal Baaris ay ka waday Biyaha lagu muransan yahay ee Soomaaliya
Seven injured as Somali Forces attacked with hand grenade in Baledwyne